Vanogadzira mabhegi - China Briefcase Factory, Vatengesi
Bhegi bhegi T-L5150
TIGERNU nzira nhatu dzekushandisa dzinoshandurwa bhegi repombi
Iyo inoshandurwa bhegi rehombodo rine rakasimbiswa rinotakura mubato uye tambo yepafudzi rinotendera kuti ishandiswe sebhegi, bhegi repafudzi kana bhegi remutumwa
Unyanzvi: Saizi bhegi iri 32 * 27 * 11cm (L * W * H), ine padhaputopu slot slot inokwana kusvika 13.1 - laptop. Ine homwe dzakawanda uye mesh muhomwe mukati, chengetedza zvinhu zvako zvezuva nezuva zvakarongeka.Iri bhegi rinogona kuvhurwa 90 degree ine tambo mbiri parutivi kuti irambe yakatwasuka kuti iwe ushandise laptop yako chero kupi.
Hunhu: Bhegi racho rakagadzirwa nekupwanya uye kukwenya kusagadzikana oxford, yakasimba, inorwisa-kubvarura uye eco-inoshamwaridzika.Zipper yekamuri huru inzira mbiri yakavhurika zipi, yakagadzirirwa nehupamhi hwepamusoro uye yakatsetseka kuvhura nekuvhara, inogara kwenguva refu uye kuputika. -kudzivirira.
Tambo yemikwende kumusana inokutendera kuti uise bhegi musutukesi rako zviri nyore panguva yekufamba kwako.
Iyo yakanaka yakagadzirirwa dhizaini bhegi, fashoni uye inobatsira chero chinangwa, kufamba, bhizinesi, chikoro, basa, hupenyu hwezuva nezuva.
Kukura: 43 * 16 * 31cm (L * W * H) .Imwe yakapfekerwa 15.6inch laptop compartment ine homwe diki diki dzePadad yako, makadhi ebhizinesi, zvinyoreso, mapepa uye mafaera. Chimwe chikamu chikuru chine mashandiro akasiyana. Zvidimbu zvitatu zvakapatsanurwa zvinobviswa zvinogona kugadziridzwa uye nekupa kumwe kudzivirirwa kune yako kamera michina. Mukati mune zippered mesh homwe yezvishongedzo, iPad uye mamwe mapiritsi nezvimwewo. Inogona kushandurwa nyore nyore kuita bhajeti rakapfava rakatwasuka reguta nekubvisa makamuri akapatsanura kamera. Yakanyanya nyore kushandisa kwezuva diki nzendo, pane nzvimbo yakakwana yega magiya. Zviripachena kuti dema dema rinonyanya kushanda mukushandisa kwemazuva ese.
Feature: Splashproof zvinhu zvinodzivirira zvinhu zvako kubva pakunyorova kubva kunaya. Inobviswa uye inogadziriswa bhandi repapfudzi. Kukura kwakakura kwezvaunoda zuva nezuva.